Ukunikezelwa koqeqesho kwi-intanethi kunye nobuso ebusweni kwii-Geo-Engineering izicelo zininzi namhlanje. Phakathi kwezindululo ezininzi ezikhoyo, namhlanje sifuna ukubonisa ubuncinci izifundo ezilithoba ngendlela yolawulo lwezixhobo zendalo, ziinkampani ezintathu ezinikezela ngoqeqesho olunomdla. I-Instituto Superior de Medio ...
I-AutoCAD Course ESRI masters QGIS
Imephu ye-GIS, ngaphandle kokusinika ibhlog enomdla, igxila kwimodeli yayo yeshishini kunikezelo loqeqesho kwi-Intanethi kwimiba yomxholo we-geospatial. Ngo-2013 kuphela, bangaphezulu kwama-225 abafundi abathathe izifundo zabo, inani eli libonakala kum liqwalaselekile, xa kuthathelwa ingqalelo ukuba inzame ikuluosomashishini ababini abaqale oku kancinci ...
ArcGIS-ESRI, Ukufundisa i-CAD / GIS, Geospatial - GIS, qgis, Ezahlukeneyo
U-Esri unikezela iArcGIS yaBafundi uhlelo olukhethekileyo olunendaba zamva nje kunye nenkqubela phambili kubuchwephesha bohlalutyo lobume babafundi beekholeji. Ukusetyenziswa okuqhubekekayo kwetekhnoloji ye-Esri kwiiDyunivesithi kunye neemfuno ezizodwa kunye neemeko zabafundi, kumenze uEsri ...